Isemthethweni ingcebiso kwi imisebenzi mthetho a isiqinisekiso ukuba ufumana bonke ootitshala izibonelelo guaranteed ngokuthi urhulumente Kuwe, malunga umsebenzi njengoko ebalulekileyo yinxalenye loluntu ubomi oyedwa. Ngamanye amazwi, isemthethweni ingcebiso kwi imisebenzi umthetho ngokuphonononga abasebenzi kwaye abaqeshi ukulawula ubudlelwane emsebenzini kunye nezinye ngokusondeleleneyo zidityanisiwe kunye nabo ubudlelwane phakathi ka-unearned uphawu.
Ukufumana ingcebiso, umsebenzi uya kuba uqinisekile, ukuba umqeshi waba treating kuye honestly ukuba ukho insured ngokuchasene injury kwi umsebenzi, kwi-ngqesho, kwaye ukuba iya uthathe umhlala phantsi ekupheleni career indlela. I-umqeshi, elinye icebiso uza luncedo yokuba umsebenzi uya kuba insured ukusuka unganyanisekanga abasebenzi, ukuba imveliso ayisayi ngesiquphe mthethweni khangela ukuba wonke umntu oya kusebenza ngomhla yeshishini iya kuba socially insured ngaphandle naziphi na iindleko ezingaphezulu kwaye esimsulwa phambi kwabantu kwaye urhulumente.
Isemthethweni ingcebiso kuya kusinceda ukusombulula imiba enxulumene abagulayo shiya, dismissal, umsebenzi, imisebenzi, iincwadi, maternity leave, ukwamkela-ngqesho izibonelelo nokonzakala kwabo emsebenzini. Luhlomle kuwo kuba ebhalisiweyo kwi kwiwebhusayithi yethu ethi abaqondisi-mthetho, egama professionalism akukho ukuthandabuza, kodwa ukuba Ufuna ziyimfihlo isemthethweni ingcebiso kwi imisebenzi umthetho luhlomle kuwo imali kuqinisekisa ukuba zonke personal data ndiya kuhlala phakathi Kwenu kwaye Yakho lawyer abo kusibeka zabo zonke ulwazi kunye namava ukusombulula ingxaki Yakho positively kwaye njengoko kamsinya kangangoko kunokwenzeka.
FREE ISEMTHETHWENI INGCEBISO HOTLINE